Smart Electronics MCPCB maka ọkụ tube ọkụ MCPCB maka ọkụ ọkụ dị elu
Smart Electronics MCPCB maka ọkụ tube ọkụ MCPCB maka ọkụ ọkụ dị elu
1.Whech ụdị PCBS ka ị ọkachamara na?
Anyị na-pụrụ iche na-amị Singe-n'akụkụ PCB, Double-n'akụkụ PCB, Multilayer PCB, Aluminium PCB, Spray Tin PCB, Immersed Gold PCB, wdg.
2.Gịnị bụ oge ndu gị?
Oge ndu na-adịkarị n'oge ebe a, na-abụkarị 3-5days maka nlele PCB, ụbọchị 7-15 maka mmepụta oke.Maka ụfọdụ ọnọdụ pụrụ iche, anyị nwekwara ike ịnye ndị ahịa ndụmọdụ tupu oge eruo iji zere ihe ọ bụla na-atụ anya ma ọ bụ ọnwụ n'akụkụ ndị ahịa.
3.What bụ gị ule amụma na otú ị na-achịkwa àgwà?
Maka ihe nlele, a na-anwalekarị site na nyocha ụgbọ elu;maka PCB Mpịakọta ihe karịrị 3 square mita, nke a na-anwalekarị site na ntinye, nke a ga-adị ngwa ngwa.N'ihi na e nwere ọtụtụ nzọụkwụ na PCB mmepụta, anyị na-emekarị nnyocha mgbe ọ bụla nzọụkwụ.
4.Gịnị bụ ngwugwu gị?
Na ngwugwu agụụ ime na katọn pụọ.
Nke a dabere na ndị ahịa, mgbe ụfọdụ anyị na-ebugharị site na onye na-ebugharị anyị, onye bụkwa ụlọ ọrụ nke DHL, TNT, UPS, FedEx, na ndị ọzọ.Onye na-ebugharị anyị nwere ike ịnye ọnụ ahịa ibu dị mma karịa ka anyị na-enweta ozugbo site na ụlọ ọrụ ahụ awara awara.
6.Gịnị bụ ikike mmepụta gị?
Ike anyị bụ nkezi 30,000 square mita kwa ọnwa.
7.I naanị nwere PCB sample, ọ bụghị PCB faịlụ, ị nwere ike na-emepụta ya maka m?
Ee, anyị nwere ike idetuo faịlụ dabere na gị sample, faịlụ a aha Gerber, na mmepụta mgbe ahụ na-nyere Gerber faịlụ.
8.Can you chepụta Gerber faịlụ?
Anyị nwere ike chepụta Gerber faịlụ ma ọ bụrụ na ndị ahịa nwere ike inye anyị schematic, schematic sample nwekwara ike inye ma ọ bụrụ na ndị ahịa chọrọ.
9.What ụdị PCB faịlụ Ọkpụkpọ ị nwere ike ịnakwere maka mmepụta?Kedu ngwa CAM ị na-eji?
Anyị na-anabata faịlụ Gerber maka mmepụta.CAM350, GENESIS, UCAM, CG-CAM, V-2000.
10.Ị ga-ekwe ka m tinye ọtụtụ akụkụ ọnụ ọgụgụ n'ime otu panel?
Ee, nke a na-emekarị na anyị factory, otú a nwere ike inyere ndị ahịa aka belata ụfọdụ na-eri na n'ókè ụfọdụ, ọ pụrụ inyere ibelata ụfọdụ mgbakọ na-eri.
11.What bụ gị kacha nta iji ibu?
Anyị enweghị mmachi na MOQ, prototype, ọkara olu na nnukwu olu bụ ihe niile anabatara.
12. Will ROHS Lead-Free Custom Spec.A ga-eji akara enweghị ndu ka akara bọọdụ?
Ee, nwere ike, mana chọrọ onye ahịa ka ọ kọwaa ihe a chọrọ na faịlụ.
13. Are m imewe faịlụ mma mgbe m na-edo onwe ha n'okpuru gị maka n'ichepụta?
A ga-echekwa faịlụ onye ahịa ọ bụla nke ọma ebe a na ụlọ ọrụ anyị, anyị agaghị ekwe ka ndị ọzọ mara.Anyị nwere ike ịbịanye aka na NDA.
Nke gara aga: Aluminom LED Bulb Light PCB, Onye nrụpụta OEM MCPCB
Osote: PTR/IR sensọ ebipụtara Circuit Board PCB Maka ọkụ ọkụ ọkụ
MCPCB LED na Cree LEDS Circuit Board PCB
Direct thermal ụzọ MCPCB na Sink-pad MCPCB, C...
Otu nkwụsị MCPCB Sourcing PCB Assembly Design Ser...
Shenzhen top àgwà aluminum PCB MCPCB na Ta ...
40 * 40mm ọla kọpa PCB & PCBA a factory SMD elu ...
Aluminom LED Bulb Light PCB, OEM MCPCB Mepụta ...